Warar - Miyaad ogtahay in barkinta shilka ee markabku soo furmayo inta badan lagu qasan yahay Calool-wadeyaasha Pneumatic?
Ma Ogtahay in barkinta shilka ee markabku soo furmayo inta badan lagu qaso Fender-ka Caloosha? Barkinta shilka ayaa loo adeegsadaa hawlgallada markabku bilaabmayo sidaas awgeedna waxay u adeegaan ujeedo gebi ahaanba ka duwan Fender-ka Pneumatic. Fenders Pneumatic Fender waxay ilaaliyaan qaabdhismeedka maraakiibta iyo maraakiibta, gaar ahaan inta lagu jiro hawlgallada markab-ilaa-markab. Tayada iyo waxqabadka mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa ah muhiimadda ugu weyn. Barkinta diyaaraduhu waxay gacan ka geystaan ​​sidii ay si ammaan ah u bilaabi lahaayeen markab waxayna ku shaqeeyaan gebi ahaanba taas oo ka muuqata baahiyaha tayada hoose iyo habka wax soosaar ka fudud. Habka wax soosaarka ee barkinta shilka lama barbar dhigi karo midka loo yaqaan 'Pneumatic Fenders'.
Hordhaca kubbadda la buufin karo ：
Dabaq caag ah oo la buufin karo (oo sidoo kale loo yaqaan ball) waa nooc ka mid ah keydka xannibaadda iyo sahayda maraakiibta ilaaliya, oo si ballaadhan loogu adeegsado maraakiibta, tas-hiilaadka berriga, barxadaha badda, dekedaha, dekedda, doonyaha iyo meelaha kale. Kubbadda caagga ah ee la buufin karo ayaa ka waxtar badan guud ahaan suumanka caagga ah, waana mid dhaqaale, sidaa darteed waa mid caan ah.
Dahaarka la buufin karo ayaa ah weel hawo hawo hawo leh oo ka samaysan maro isku dhegan oo laalaadinayo sida wax qalfoof ah. Mashiinka iyo kubbadda ayaa ku dul sabayn kara biyaha ka dib markii ay ka buuxsamaan hawo is cadaadisay. Waxay muhiim u yihiin markab-ka-rarida markabka iyo dhexdhexaad-ka-markab-ilaa-Buffer. Isla mar ahaantaana, feeraha sambabaha ayaa nuugi kara tamarta saameynta dhaqdhaqaaqa markabka, wuxuu yareyn karaa dib u noqoshada markabka, wuxuuna si weyn u wanaajin karaa badbaadada markabka ku xiridda.
Duufaanta la buufin karo (kubbadda) waxay u isticmaashaa hawo dhexdhexaad ahaan waxayna u isticmaashaa hawo cadaadis leh si ay u soo nuugto tamarta saameynta leh, taasoo markabka ka dhigeysa mid dabacsan marka la xirayo, si loo gaaro saameynta shilalka iyo ka fogaanshaha shilka Difaacayaasha la buufin karo (kubbadda) ayaa si weyn loogu isticmaalay booyadaha, maraakiibta konteynarrada, maraakiibta injineernimada, maraakiibta kalluumeysiga badda, barxadaha badda, marsooyinka waaweyn, dekeddaha milateriga, buundooyinka waaweyn ee buundooyinka iyo noocyada kale ee maraakiibta iyo aagagga xeebta.
Fender Rubber, Boorsada Hawada ee Markabka, Barkinta Hawada Badda, Maraakiibta Tec, Block isku dhafan, Shiinaha Rubber Fender,